Usoro zuru ezu iji nweta nyocha IP adịghị - IP44, IP54, IP55, IP65, IP66, IPX4, IPX5, IPX7
site na Admin na Sep-10-2020
Ntuziaka zuru ezu maka ntinye IP adịghị - IP44, IP54, IP55, IP65, IP66, IPX4, IPX5, IPX7 You nwere ike ihu ngwaahịa ndị nwere akara na ha ma ọ bụ na ngwugwu ha, dị ka IP44, IP54, IP55 ma ọ bụ ndị ọzọ yiri ya. Ma ị maara ihe ihe ndị a pụtara? Ọfọn, nke a bụ koodu mba ụwa nke ...GỤKWUO »
Anyị niile na-ahụ ntụaka maka ngwaọrụ ndị na-enweghị mmiri, ngwaọrụ ndị na-eguzogide mmiri na ngwaọrụ ndị na-ere mmiri na-atụba na ngwaahịa eletrọniki. Ajụjụ buru ibu bụ: Kedu ihe dị iche? Enwere otutu ederede edere na isiokwu a, mana anyị chepụtara na anyị ga-atụba ọnụọgụ abụọ anyị na ta ...GỤKWUO »
site ha na Ọgọst-25-2020
Kedu ihe bụ ntọala ala? Ogwe aka nke ala bụ ihe nkwụnye nkwụnye nke dị n'ime ala. Enwere ike ime ụdị a ụdị maka plọg dị iche iche, mana a na-ejikarị ya maka njikọ eletriki, ekwentị, ma ọ bụ eriri. A na-achịkwa ojiji nke ntọala ala site na koodu iwu n'ọtụtụ ...GỤKWUO »